I-china Twist drill, i-stainless steel drill bit, i-steel drill bit, i-iron drill bit, i-HSS drill bit, imbobo yezinkuni imboni kanye nabakhiqizi | Boda
Twist sokuprakthiza, engagqwali sokuprakthiza kancane, steel sokuprakthiza kancane, yensimbi sokuprakthiza kancane, HSS sokuprakthiza kancane, ukhuni imbobo isaha
Umkhiqizo: Ukugaya Okugcwele kwe-Twist Drill Bits
Ama-twist drill asetshenziswa kakhulu emakethe enziwe nge-high speed steel (emhlophe) kanye ne-carbide eqinisiwe (emnyama emnyama).
Ijubane lensimbi linobulukhuni obuncane, kepha ukuqina okuhle nentengo ephansi, kepha ayikwazi ukusetshenziswa ekusikeni ngesivinini esikhulu. Imvamisa isetshenziselwa izinto ezinobulukhuni obuphansi, njenge-aluminium alloy, i-carbon steel ephansi, njll.
I-carbide ehlanganisiwe inobulukhuni obuphakeme, ukuqina okuncane nentengo ephezulu. Ingasetshenziselwa ukusika ngesivinini esikhulu. Imvamisa isetshenziselwa izinto ezinobulukhuni obuphakeme, njenge-alloy steel ne-carbon steel ephezulu ngemuva kokuncishwa.
IBOSENDA Full Grinding Twist Drill Bits / Metal Drill Bits enezinga lezimboni, faka isicelo sensimbi engagqwali, insimbi yensimbi, insimbi yensimbi, i-beam, i-aluminium alloy nezinye izinto zensimbi. Iqukethe insimbi yensimbi ephezulu esezingeni eliphezulu, ukwelashwa nge-vacuum heat, ibukhali futhi ihlala isikhathi eside.
Kokubili i-HSS nezinto ze-carbide ezihlanganisiwe, zingasetshenziselwa insimbi engagqwali, ishidi lensimbi, i-engeli yensimbi, ithusi ne-aluminium nezinye izinsimbi. Ukugaya ngokuphelele, ngensingo ebukhali, futhi kufakwa ukumelana okuphezulu futhi kunempilo yenkonzo ende. I-shank eqondile ilungele ukubhoboza ngesandla kagesi kanye ne-bench vice.
Twist sokuprakthiza izingcezu ezahlukene HSS izinto futhi kusukela kanzima ingxubevange izinto ingasetshenziswa izinto zensimbi ezahlukene nge service yabo ehlukene lives.The Cemented khabhayithi impahla sokuprakthiza izingcezu has a ubulukhuni high, amandla aphezulu, bafake okusezingeni eliphezulu ukumelana futhi ukugqwala ukumelana, ukusebenza kakhulu, esitebeleni kanye nekhwalithi ethembekile.
Sikhetha amabhithi we-twist afaneleka kakhulu kuwe ngokusho kwezinto zakho zokubhola, sinikela ngemikhiqizo yobungcweti kunabo bonke eminyakeni eyishumi edlule, sithumele izingcezu zethu zokuprakthiza cishe kuwo wonke amazwekazi ahlanganisa amazwe amaningi emhlabeni wonke, ikhwalithi yethu ihlala ingumgogodla webhizinisi lethu futhi sizohlala sigcizelela ukugcizelelwa kokulawulwa kwekhwalithi kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva ukuze siqhubeke nokuncintisana emkhakheni.
IBOSENDA Twist Drill Bits inikezela ngemininingwane ephelele, yanelisa ukubhola kwazo zonke izinhlobo zezinto zensimbi.
Langaphambilini I-Tip Tap, i-Chip Groove Tap, i-Straight Flute Machine Tap, i-Full Grinding Machine Taps, i-M35 Cobalt
Olandelayo: Woodcutting router bits, stright shank, woodworking cutter, router izingcezu
ngokhuni roller bit isethi, Woodworking broach ...
Isando sikagesi, isisel kagesi esalungiswa ngogesi, i-SDS, Ma ...